Tallaal, daawo iyo daaweyn - Krisinformation.se
TB21 Vaccin, läkemedel och behandling So
Waxa aad halkan ka helaysaa macluumaad ku saabsan qorshaha talaalka, iyo waxyaabaha ku saabsan sida ay bulshadu ugu qorsheyneyso inay ugu dabagasho khatarta uu leeyahay talaalka iyo sidoo kale waxyaalaha dawooyinka iyo daaweynta covid-19 ku saabsan.
Uppdaterades 21 apr 2021 11:41
Sidee ayaa dadka loo kala hor talaalayaa?
Dadka baahida ugu badan ee difaaca fayruska covid-19 leh ayaa marka ugu horeya talaalka loo soo bandhigayaa.
Wajiga 1: Kooxda ugu horeysa ee talaal la siinaayo waa kuwa ku nool guryaha dadka waayeelka lagu xanaaneeyo ama dadka leh adeega guri (hemtjänst), kuwa isla qoyskaa ka tirsan iyo shaqaale la shaqeeya.
Wajiga 2: Markaa ka dib ayaa talaalka la soo bandhigi doonaa dadka 65 sano jirka ah ama kuwa ka weyn. Waxa ka mid ah halkan dadka waaweyn ee leh waxqabadyo LSS-ta ama gunada kaalmada qof caawiya, iyo sidoo kale shaqaalaha daryeelka iyo xanaanada, dadka loo sameeyay qaliin dhuuxa lafta- ama xubin kale oo jirka ah loogu geliyey iyo sidoo kale dadka kalyaha loo sifeeyo.
Wajiga 3: Wajiga saddexaad ayaa kuwa kale ee khatar sareya oo ay covid-19 ku qaadayaan leh loo soo bandhigayaa tallaalka iyo sidoo kale dadka ay ku adag tahay inay raacaan talooyinka xakamaynta fayruska, tusaale ahaan dadka qaba asaasaqa ama garaad ahaan ama maskax ahaan naafada ah. Waxay xitaa khuseysaa dadka xaaladaha bulshada ee khatarta ah ku nool.
Wajiga 4: Ugu dambeyntiina, dadka aan ka mid ahayn mid ka mid ah wejiyadaas hore ayaa loo soo bandhigi doonaa talaalka. Carruurta iyo dhalinyarada 18 sano jirka ka yar ayaan caadi ahaan loo soo jeedin doonin inay covid-19 iska talaalaan. Haddii ay jiro cudur loo sababeynaayo ayaa lagula talinayaa in dhakhtarka daaweynaaya lala xiriiro. Folkhälsomyndigheten ma soo jeedinayso in dumarka uurka lehi covid-19 iska talalaan. Ilaa hadda ma jirto xog ku filan oo amaanka ah si loogu soo jeediyo/lagula taliyo taas.
Tirakoobka Folkhälsomyndigheten ee talaalka covid-19 ku saabsan ka akhri (af Iswiidhish ah)
Waxay Folkhälsomyndigheten dooratay inay dib u dhigto talobixinta dadka da'doodu ka yar tahay 18 sano jir. Carruurta cudurrada gaarkood qabta ama xaaladaha qaar keeni kara khatar ka sii badan oo lagu qaadaayo covid-19 ayaa xaaladaha qaar la talaali karaa waxase markaa lagala hadlayaa dhakhtarka ilmaha.
Goorma ayay aniga doorkeyga noqoneysaa?
Waxay taasi ku xiran tahay kooxda aad ka tirsan tahay markaas ayaa laguu soo bandhigi doonaa talaal marka la heli karo. Gobolada kala duwan ayaa laga yaabaa inay yeeshaan habab waxqabad oo kala duwan oo sida ay dadka ugu soo kala hor bandhigayaan talaalka ah, waxaanay taasi kala duwanaan kartaa marka kooxada kala duwan la talaalaayo. Si aad ugu ogaato kooxda hadda talaalka loo soo bandhigaayo, macluumaadka ka fiiridin region ama 1177 Vårdguiden.
Muxuu tallaalku kaa caawinayaa?
Waxa uu tallaalku abuurayaa kahortag cudurka oo halis ku galiya. Talaalka ka dib ayaa habdhista difaaca jidhka uu sameysanayaa difaad covid-19 ku lid ah. Laakiin lama hubo in dhamaan dadka la talaalay ay kuligood difaac buuxa helaan. Waxay taasi khuseysaa dhammaan talaallada, ee ma aha uun talaalka covid-19. Laakiin wali waxaad leedahay khatar ka yar oo aad si xun ugu xanuunsato.
Maxaan tallaalka ka dib ka fikiraa?
Waxay dadka la tallaalay saddex todobaad ka dib dawskooda koowaad helayaan difaac wanaagsan oo ka ilaaliya inay jiro xun yeeshaan/ aad ugu xanuunsadaan. Waxaase muhiim ah in tallaalka la raaciyo dawska labaad si difaacu ugu noqdo mid waxtar leh oo muddo dheer shaqeeya.
Qofka la tallaaley ayaa saddex todobaad marka uu dawska koowaad qaato la kulmi kara dadka ka tirsan dhowr qoys oo kala duwan. Waxayna ka soo adeegsan karaan dukaanka ama ay aadi karaan timo-jaraha, laakiin waa inaanay dadka kale saxmad/ciriiri badan u keenin. Iska ilaali inaad gaadiidka dadweynaha ku safarto xilliga saxmada badani jirto. Taas ayay Folkhälsomyndigheten ku soo qortey talobixinteedii tallaalka lagu saleeyey.
Qofka la tallaalay uma baahna inuu guriga joogo xitaa haddii qof kale oo qoyska ka tirsan uu covid-19 qabo.
Waxa sidoo kale suurtogal ah in carruurtaada iyo carruurta ayeeyda/awoowga loo yahay lala qaato wakhti iyadoo aan masaafad la isku jirsaneynin, haddii aan wax calaamad ah la laheyn.
Dadka la tallaalay ee ku jira daryeelka waayeelka ayaa hoyga ka bixi kara si ay ehelkooda ugu soo booqdaan. Waxa weli muhiim ah in laga fikiro sidii loo ilaalin lahaa dadka ka tirsan kooxaha la wada dhaqmo ee kooxda khatarta ugu jira ka midka ah iyadoo la raacaayo talooyinka ku saabsan sida naftaada iyo ta dadka kaleba loo ilaalinaayo.
Maadaama oo faafitaanka infegshanka ee bulshada dhexdeedu uu weli aad u badan yahay, oo ay wakhti qaadan doonto ilaa inta tiro badan oo dadweynaha ka mid ah la tallaalaayo, waa in la qabsiga tallaalku si tartiib tartiib ah ugu dhacaa. Talooyinka aasaasiga ah ee ah in guriga la joogo haddii la jiran yahay, gacmaha la dhaqo, masaafad la isku jirsado oo la is tijaabiyo haddii calaamado la leeyhay ayaa wali dhamaan dadweynaha sii khuseysa.
Halkan ka akhriso talobixinta Folkhälsomyndigheten ee lagu saleeyey tallaalka
(boggu waxa uu ku qoran yahay af Iswiidhish)
Tijaabo qaadista haddii calaamado jiraan tallaalka ka dib
Qofka maalmihii dhawaa laga tallaalay covid-19 ee dareemaaya calaamado u caadi ah saameynaha xunxun ee tallaalka ka dib ayaan u baahneyn inuu is tijaabiyo haddii ay calaamadahu iska tagaan/baaba'aan 24 saacadood gudahood. Guriga joog ilaa inta aad calaamado leedahay.
Haddii ay calaamadahu wali sii jiraan maalin iyo habeen ka dib ayay muhiim tahay inaad is tijaabiso, xitaa haddii aad is tallaashay. Waa muhiim inaad ogtahay haddii aad covid-19 qabtid si aanad dadka kale ugu qaadsiinin.
Waxaad boggagan soo soda ku jira macluumaad dheeraad ah oo taas ku saabsan. (Boggagu waxay ku qoran yihiin af Iswiidhish)
1177 iyowaxyaalaha tijaabo qaadista gobolkaaga ka shaqeynaaya
Macluumaadka Folkhälsomyndighetens ee ku saabsan qaadista tijaabada
Wax dheeraad ah oo tallaalka ku saabsan ayaad ka helaysaa krisinformation.se
Waqtigaan xaadirka ah ayaanay jirin warqad cadeyn ah ama shahaado qaran oo dhamaan gobolada ka dhaxeysa. Hey'ada maamulka dhijitaalka ayaa ka shaqeyneysa sidii loogu soo saari lahayd shahaado dhijitaal ah taas oo cadeyn tallaalka ah. Mid noocan ah ayaa laga yaabaa in galitaanka wadamada qaar la iska dalbado, ama tusaale ahaan markay jiraan bandhigyada dhaqanka iyo cayaaro. Hadafka xukuumadu waxa weeye in shahaadada tallaalka ee dhijitaalka ah xagaaga 2021 la heli karo. Ilaa iyo xilligaas ayay tahay mas'uulda cidda talaaleysa inay warqad cadeyn tallaalka ah bixiyaan.
Macluumaad dheeraad ah ayaa laga akhrisan karaa boggagan internetka (boggagu waxay ku qoran yihiin af Iswiidhish)
Hey'ada maamulka dhijitaalka
Tallaalka loo ansixiyey covid-19
Waxa Iswiidhan iyo Midowga Yurub ka jira afar tallaal oo covid-19 loo ansixiyey:
Comirnaty, oo ay soo saaraan Pfizer / BioNTech.
Tallaalka Covid-19 ee Moderna oo ay soo saarto Moderna.
Vaxzevria, oo ay soo saarto Astra Zeneca (oo hore loo dhihi jiray tallaalka Covid-19 ee AstraZeneca). Waxay Folkhälsomyndigheten soo jeedinaysaa in tallaalkaas la siiyo dadka 65 sano jirka ah ama wixii ka weyn.
Tallaalka Covid-19 ee Janssen, oo uu soo saaro Janssen.
Waxaad läkemedelsverket ka helaysaa macluumaad dheeraad ah oo tallaalada kala duduwan ku saabsan. (boggu waxa uu ku qoran yahay af Iswiidhish)
Tallaalka waa in ey ansixiyaan waxaa sidaas sheegaya gobolka (EU) iyo Hey’adda daawada.
Badanaa waxaa tallaal ansixiya xarun dhexe oo Midowga yurub ah. Waxey ka dhigantahay in ey kontoroolayaan khabiirro ka socda waddamada xubnaha ka oo dhan, kuwaas oo ey ka mif tahay Hey’adda iswiidhishka ah ee daawada. Ansixinta waxey ku saleysantahay warbixin iyo macluumaad laga helayo soosaaraha tallaalka. Gudaha Midowga yurub waxaa jira baaritaanno iyo daraaseyn caafimaad oo ey qasab tahay in la sameeyo iyo inta ey la egyihiin.
Marka qiimeyn lagu sameynayo haddii tallaal la ansixinayo iyo haddii kale waxaa leys barbar dhigaa faa’iidada tallaalka iyo khatarrada suurto galka ee dhinaca waxyeellooyinka ee lagu sheego daraasaadka caafimaad. Xattaa marka tallaalka la ansixiyo korjoogid ayaa lagu sameynayaa iyo ilaalin si loo helo waxyeelleyn cusub.
Saameyn xun oo noocee ah ayaa tallaalka covid-19 keenayaa?
Waxa ugu caadisan waa saameynta xun ee ku kooban aaga cirbada lagaaga muday, sida tusaale ahaan xanuun, barar och guduudasho. Waxaad adigu xataa yeelan kartaa muruqyo xanuun, qandho, madax xanuun dareen guud oo bukaan ah. Kuwaasi waa falcelinno dabiici ah oo difaaca jirku uu sameeyo. Xaaladaha badankooda ayay falcelinadu yihiin qaar khafiif ah oo iska taga dhawr maalmo gudahood. Haddii calaamadahu wax ka badan 24 saacadood sii socdaan ayaan laga yaabin inay taasi saameyn xun tahay iyadoo markaasna covid-19 lagaa baaro doono. Guriga joog ilaa iyo inta aad calaamado leedahay.
Macluumaadka ku saabsan saameynaha xun xun ee caadi ahaan la yeesho iyo kuwa dhifka ah ayaa laga akhrisan karaa waraaqaha baakadaha tallaalka ee laga helo Läkemedelsverket.(boggu waxa uu ku qoran yahay af Iswiidhish)
Dhammaan saameynaha xun xun ee laga shakisan yahay ayaa dabogal lagu sameyn doonaa
Waxa ay dawladu Läkemedelsverket u xilsaartay inay dabagal ku sameyso amaanka iyo saameynta xun ee talaalada soo socda ee ka hortagga covid-19.
Wax dheeraad ah oo ku saabsan ka akhri saameynta xun ee Läkemedelsverket la soo wargaliyey. (boggu waxa uu ku qoran yahay af Iswiidhish)
Waxyaalaha ku saabsan caymiska haddii saameyn xun la yeesho
Haddii aad u aragto inuu dhaawac kaa soo gaadhay dawo ayaad xaq u leedahay inaad la xidhiidho Svenska Läkemedelsförsäkringen AB si kharash la'aan dacwadaada loogu eego. Waxay iyagu baaritaan ku sameyn doonaan arinta iyadoo haddii loo arko inay tahay waxyeelo dawadu keentey, aad magdhow heli karto. Waxay xitaa taasi khuseysaa talaalka mid ka mid ah talaallada loo ansixiyay covid-19.
Wax dheeraad ah ka akhri Läkemedelsförsäkringens Boggaga internedka (ku qoan af Iswiidhish)
Macluumaadka ku saabsan heshiiska khuseeya dhaawacyada ka yimaada istalaalista covid-19 ee bogga internetka ee xukuumada (af iswiidhish)
Laba dawo oo loogu talogalay in covid-19 lagu daaweeyo ayaa Yurub la anxisiyey. Taas waxa weeye dawada fayruska ku lidka ah ee Veklury Veklury (remdesivir) iyo Dexametazone, taas oo ah dawo caabuqa yareysa/dhimeysa oo hoos u dhigta difaaca jirka.
Bishii Luulyo 2020, ayay Guddiga Midowga Yurub uu Veklury siisey "Ansaxin shuruud leh". Taasi waxay micnaheedu tahay in dawada la ansixiyey in kasta oo macluumaadka la hayaa uu ka baaxad yaryahay intii caadi ahaan la iska dalban lahaa. Ansaxin shuruud leh ayaa jirta maaddaama oo ay xogtu tilmaameyso in faa'iidooyinku ay ka badan yihiin khataraha iyadoo in isla markaaba la helo ay ku habboon tahay marka laga eego dhanka caafimaadka bulshada.
WHO ayaan soo jeedinaynin in remdesivir loo isticmaalo bukaanka qaba covid-19.
Läkemedelsverket macluumaadka ku saabsan Veklury (remdesivir) iyo Dexametason (boggu waxa uu ku qoran yahay af Iswiidhish)
Soo sheeg waxyeellooyinka/saameynta xun
Haddii dawooyinka laguu siiyey si covid-19 lagaaga daaweeyo ay waxyeellooyin/saameyn xun kuu keenaan ayay muhiim tahay inaad kuwaas soo wargalisid Läkemedelsverket. Soo gudbi warbixinta adigoo soo maraaya bogga internetka ee Läkemedelsverkets.
Hey’adda dawooyinku waxay halkan ku ururisay su’aalo iyo jawaabo ku saabsan covid-19 iyo dawooyinka.
Dadka uu ku dhacyo cudurka covid-19 badankoodu waxay iska dareemaan calaamadaha caadiga ah ee hergebka ama durayga, mana u baahdaan in ay daryeel caafimaad raadsadaan. Koox yar oo ka mid ah dadka cudurka la qaadsiiyo ayaa aad u xanuunsada, una baahan kara in daryeel isbitaal lagu siiyo. Si dhakhsi ah laamaha caafimaadka ula xiriir haddii si lama filaan ah ay xaaladdaadu u xumaato ama ay neefsashadu kugu adkaato xitaa adigoo nasanaya.
Is daryeelidda marka la isku arko calaamado cudur oo yar-yar
Haddii aad isku aragtid calaamado cudur oo yar-yar waxay 1177 ku talineysaa waxyaabo fara badan oo aad adigu sameyn kartid si aad wacnaan u dareentid:
Aad wax u cab. Aadbey muhiim u sii tahay haddii aad qufaceysid ama feebaro ku heyso.
Kor u qaad sariirta madaxeeda adigoo hoos gelinaya barkin dheeraad ah.
Isticmaal dawo feebaraha dejineysa.
Si aad ah u naso laakin iska ilaali in aad waqti dheerna meel jiiftid. Taasi waxay xumeyneysaa fursadaha ay sambabuhu ku shaqeyn karaan, waxayna adkeyn kartaa ka bogsooshada cudurka.
Talooyin badan waxaa laga heli karaa 1177.
Daweynta marka uu cudurku khatar yahay
Qaar ka mid ah dadka uu ku dhacyo covid-19 waxaa ku dhaca caabuq sambabaha ah oo khatar ah, waxaana ku adkaan karta in ay neefsadaan. Haddii aad, aad u xanuunsatid waa lagu daweynayaa si loo taageero shaqada sambabaha iyo xubnaha kale ay uu cudurku saameyn karyo. Waxay tusaale ahaan daweyntu ku saabsanaan kartaa in nakhas dheeraad ah lagu siiyo ama neefsashada lagaa caawiyo iyadoo la adeegsanayo qalabka fududeeyo neefsashada. Halkan waxay 1177 uga sheekeyneysaa sida la isugu daweynayo qalabka fududeeya neefsashada.
Baxnaaninta ka dambeysa covid-19
Waqtiyada xannaaneynta bukaannada qaba covid-19 waa ay dheeraan karaan, gaar ahaan qofka si is daba joog ah loo daryeelayo.
Covid-19 ka dib, muddo dheer ayaa mararka qaarkood la dareemi karayaa calaamado cudur. Haddii cudurka lagu qaadsiiyay oo aad jir ahaan ama maskax ahaan u dareemeysid dhibaato aan dhammaaneyn waxaad u baahan kartaa in aad la xiriirtid laamaha caafimaadka. Rugtaada caafimaadka ama Hagaha caafimaadka 1177 ayaa macluumaad dheeraad ah ka siin kara halka ay tahay in aad baxnaaninta kala xiriirtid.
Hey’adda caafimaadku waxay shaqaalaha baxnaaninta ee laamaha caafimaadka u soo saartay taageero aqooneed oo ka kooban talooyin la taaban karo oo ku aaddan tababarka iyo daweynta ka dambeysa covid-19.
Sidan ayaad iskaga badbaadinaysaa khayaanada tallaalka
Waxa sida la xiriirta tallaalka covid-19 ay dadka wax khiyaameeyaa adeegsadaan rabitaanka dadka ee is tallaalida. Waxaad halkan ka helaysaa talo ku saabsan sida aad isaga badbaadin karto.
Waxay xilligan dadka wax khiyaameeyaa isku dayayaan inay is tallaalida covid-19 ka faa'iideystaan ayuu soo sheegayaa booliisku. Waxay badiyaa bartilmaamsadaan kooxaha da'dka waaweyn ah iyo dadka nugul. Waxay dadka wax khiyaameeyaa sheeganayaan inay kaa soo wacayaan Folkhälsomyndigheten ama adiga gobolkaaga iyo inay rabaan inay adiga ballan tallaalka covid-19 ah kuu qabtaan. Waxay markaas kaa dalban doonaan inaad aalada bangiga (bankdosa) isku cadeyso ama iyadoo aqoonsiga telefoonka moobaylka la adeegsanaayo, taasi waa inaanad marnaba sameynin. Isla markaaba telefoonka ku shig haddii sidan oo kale laguugu soo waco.
Xitaa waxa uu 1177 Vårdguiden ka digayaa dadka wax khiyaameeya ee isku dayaaya inay helaan macluumaadka bangiga ama tallaalka lacag ku qaataan.
Sidan ayaad iskaga badbaadinaysaa khayaanada telefoonka
Waligaa ha isticmaalin aalada bangiga ama bank-id marka uu qof si kadis ah kuula soo xiriiray oo uu taasna kaa codsado.
Waligaa cidna ha siinin koodhka ama macluumaadka kale ee xasaasiga.
Haddii qof aanad aqoonin ku soo waco oo aadan hubin, telefoonka ku dhig ama weydiiso inaad dib ugu soo wacdo lambar aad adigu soo ogaato. Waxay taasi khuseysaa haddii uu qofku sheegto inuu yahay qaraabo dhow ah ama qof ka socda bangiga, shirkad ama dowladda.
Ha ku aaminin qof adiga kula soo xiriira kaliya waxa uu garanayaa/haystaa macluumaad shaqsi ahaaneed oo adiga kugu saabsan. Dadka khayaanada sameeya ayaa macluumaadka ka soo heli kara internetka si ay kuugu khiyaameeyaan.
Haddii ay taasi kugu dhacday adiga ama aad ka shakisan tahay in lagu khiyaameeyey, isla markaaba bangigaaga la xiriir, booliiska u sheeg oo dadka kugu dhow taageero ka raadso.
Macluumaadkan soo socdaa waxay ku qoran yihiin Iswiidhish.
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan sida aad isaga difaaci karto khayaanada telefoonka ka akhriso boliiska..
Wax dheeraad ah ka oo ku saabsan waxyaalaha aad ka fikireyso haddii ay telefoon kuu soo jireen ka akhri 1177 Vårdguiden.
Wax dheeraad ah oo ku saabsan alista amni iyo warbixin khaldan ka akhri Försvarsmakten.